Nanatona ny Profesora Raymond Ranjeva izahay ato amin’ny Lakroa fa tsy be teny izy noho ny andraikitra sahaniny ao amin’ny fifampiraharahana. Niara-dalana tamin’izany dia nisy ny boky nosoratan’ny mpianatry ny Pr Ranjeva, mpikaroka doctorat (taona 1975), ihany koa. Ka niaingàna tamin’ity lahatsoratra ity ny resaka nifanaovana sy ny boky. Ndao ary arahana.
Ankatso sy Ambohidempona !
Satria manano-sarotra ny fanaparitahana ny gazety Lakroa (Lakroan’i Madagasikara) dia eto amin’ny tranonkala no hamoahana ireo lahatsoratra tokony ho novakianao tao amin’ny laharana mivoaka ny alahady 21 jona izao, laharana 4186,